Saddexda Xisbi Siyaasadeed oo mawqifyo kala durugsan iska taagay go’aan ka soo baxay Komishanka | Somaliland.Org
July 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Axsaabta Siyaasadda ee Somaliland ayaa mawqifyo kala durugsan ka istaagay go’aan ka soo yeedhay Guddida Doorashooyinka Somaliland, kaas oo sheegayay in diiwaan-gelin la’aan lagu galo Doorashada Madaxtooyada.
Guddida Doorashooyinka Somaliland ayaa Warsaxaafadeed ay soo saareen shalay ku sheegay in ay go’aan ku gaadheen in la laalo Diiwaangelinta, isla markaana bilaa diiwaangelin lagu galo Doorashada Madaxtooyada. Warsaxaafadeedkaas oo uu Guddoomiyaha guddidaas ku saxeexnaa ayaa wuxuu u dhignaa sidan; “Markaanu aragnay baaqashada Liiskii Cod-bixiyayaasha ee kama-dambaysta ahaa ee Hay’adda Interpeace laga sugayay ee ku muddaysnayd shalay oo bisha July ahayd 27. Markaanu eegnay in Muddadii doorashada Madaxtooyadu dhawr goor u baaqatay in la helo Liis xalaal ah oo aan ku cel-celis lahayn. Markaanu eegnay in muhiimadda Diiwaangelinta Cod-bixiyayaashu ahayd in la helo Doorasho xalaal ah oo qofkiiba mar kaliya codkiisa dhiibto. Markaanu aragnay deraasad laga sameeyay Serfarka iyo tayadiisa Software-ku ay aad u hoosayso oo aanay lahayn hufnaantii looga baahnaa. Markaanu aragnay in aan tiradii xogihii laga sooo diiwaangeliyay dalka oo dhammayd, 1,363,162 oo Cod-bixiye, marka laga reebo 96,111 lagu reebay xogtii Sawirka iyo Farta oo midna aanu lahayn tayadii lagu kala saari lahaa. Markaanu aragnay natiijada uu Serfarku qabtay ee ah 12,0219 xogood islamarkaana ay noqotay natiijada soo baxday 1,146,832 xogood. Markaanu aragnay soo-jeedinta lagu marin-habaabinayo umadda ee afka loo gelinayo ee ah in Doorashada lagu galo natiijada aan Serfarku kala saarin. Markaanu aragnay in hawshii Serfarku ay dhacayeen Shirkadihii Qandaraaska la siiyay oo aan lagu maamulin, laguna daba-gelin inay ka soo baxaan waajibaakooda. Markaanu aragnay Warbixintii Khabiirka Maraykanka ahaa oo si cad u sheegaysa in aan la isticmaalin Software-kii loo baahnaa inuu is-waafajiyo labada xogood ee Farta iyo Sawirka Wejiga, taas oo caddaynaysa in wax shaqo ah oo hagaagsan laga qaban hawshaas. Markaanu aragnay in aan sii-daba-gal dambe oo Serfarka lagu sameeyaa u adeegayn Dooorasho waqtigeedii qabsoonta.
Wuxuu Guddida Doorashadu qirayaa in mashruuca Diiwaangelinta Somaliland ugu fadhiyo qiimo wayn, dhaqaale badan-na Qaadhaan-bixiyayaasha iyo dadweynaha Somaliland kaga baxay, taasina ay tahay in maadaama aan Doorashadan waqti lagu shaandheeyo loo helin in Doorashooyinka dambe lagu talo-galo in laga sii shaqeeyo oo la hufo, si Doorashooyinka dambe loogu galo hadday suurto-gasho. Waxa kale oo Guddida Doorashadu u arkeen inay muhiim tahay in dib loo eego Shirkadihii hawsha loo igmaday si loo xisaabiyo Lacagtii Qaadhaan-bixiyayaasha ka baxday.
Haddaba, Anagoo maanka ku hayna xilka qaran ee aanu umadda u hayno iyo maslaxadda umaddaba, Guddida Doorashadu waxay si aqlabiyad ah ku go’aamiyeen soo-jeedinta in Doorashadan Madaxtooyada ee Somaliland lagu galo Diiwaangelin-la’aan, maadama aan natiijo xalaal ah ka soo bixin Serfarkii. Doorashadiina ay ku qabsoonto waqtigii ay u muddaysnayd ee 27-ka September 2009.”
Xoghayaha guud ee Xisbiga Mucaaradka ah ee Kulmiye Keyse Xasan Cige ayaa mar wax laga waydiiyay aragtidooda ku wajahan go’aankan, wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Horta, Komishanku waa Hay’ad qaran oo ay ahayd in uu dhexdhexaad noqdo oo si cadaalad ah u wada eega dadkay wax ka dhaxeeyaan. Go’aankaa ay gaadheen-na waxa ka muuqata inay gaadheen iyaga oo aan cid la tashan iyo dadkii ay khusaysay..waxaananu u aragnaa in aan loo dhammayn ee ay arrin doceed tahay..Mar walbana waxaanu ku adkaysanaynaa in Liiskaa uu soo saaray Serfarku ee ay ku dhawaaqeen dadkii xogta hayay in lagu dhaqmo. Waayo, hadday Interpeace odhan lahayd ma shaqaynayo Serfarkii oo natiijo sooma saarayo, waa War cad. Laakiin, sheekadan waxa keenay sheekadii UDUB ee ahayd waa lagu shubtay iyo waa lagu kala tiro batay.” Mar aanu sii waydiinay in wax ogaysiin ah la siiyay go’aanka Komishanka ka soo baxay, wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Maya, xitaa qoraalka ogaysiin nalama siinin ee anaga oo maqalnay duhurnimadii (shalay) Komishanku waa kala codeeyay oo Madaxtooyadaa looga yeedhay ayaa waxa noogu xigtay go’aankan oo waxaanu ka maqalnay uun Idaacadda, miyaanay taasi khalad ahayn?” waxaanu sheegay in Xisbiyada Mucaaradka ahi arrintaa xalay ka yeesheen kulan, isla markaana laga yaabo inay maanta ka hadlaan.
Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ayaa isagu xalayba War-saxaafadeed uu ku saxeexnaa Guddoomiye-xigeenka Aadan Maxamed Waqaf oo uu arrintan ka soo saaray kaga hadlay aragtidooda ku wajahan go’aanka Komishanka, waxaanay ku tilmaameen mid ay Xukuumaddu hagaysay. “Dhawaaqaas maanta ka soo yeedhay xubnahaas ay hagaysay xukumaddu ay xagal daacisay dedaalkii,dhaqaalihii iyo xooggii ummada iyo deeqbixiyayaashu ay galiyeen diiwaangalinta iyo helitaanka kadhka muwaadinimo si loo taabo galiyo geedi socodka dimuqraadiyada doorasho xor oo xalaal ah iyo in uu dalkani ka kasbado beesha caalamka aqoonsi buuxa.. Waxaanu ummadda u sheegaynaa in go,aankaasi kasoo yeedhay xubnahaas uu yahay mid duminaaya himilooyinka ummaddu hiigsanaysay,yahayna mid turunturro ku ah dedaalkii la soo galay dhismaha qaran kobcaya ,waxanu u aragnaa mid xeeladaysan,dhagaraysan oo xaalad abuur iyo qiiq isku qaris looga danleeyahay in lagu gaadho danno gaar ah muddo kordhis danbena loogu gogol xaadhayo, lidna ku ah shuruucdii, xeerarkii iyo heshiisyadii lawada galay” Ayaa lagu yidhi Warsaxaafadeedkaas, waxaana intaa uu ku daray oo lagu yidhi, “Waxaanu ummadda u iftiiminaynaa in mawqifka xisbiga UCID uu sidii hore uu yahay kaas oo ahaa in aanu galin doorasho aan ku salaysnayn diiwaangalin, maantana la hayo natiijadii u danbaysay ee serverku soo saaray oo ah 1.146832 oo horeba saddexda xisbi ku saxeexeen in ay aqbalayaan natiijada ka soo baxda serverka, diyarana unahay in lagu hawlgalo. Xisbiga UCID wuxuu si adag u daadefaynayaa dhawaaqaas dhabarjabka ku ah yoolkii ummaddu hiigsanaysay,waxaanu bulsho weynta Somaliland iyo waxgaradkeedaba ugu baaqaynaa in fadhiga laga kaco oo loo gurmaddo badbaadada iyo samotabixinta qarankan loo soo tafaxaytay burburintiisa oo la rabo In laga dhigo hal bacaad lagu lisay ,wixii ay soo qabsatay18kii sanno ee gooni usutaaga ,laguna niyad jabiyo cid kastoo u hiilisa inay ummadani wax noqoto. Waxaa xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID ka tacsiyadaynayaa cid kastoo dhawaaqaas maqashay oo meel kadhac ku ah ,dadkii,shakhsiyaadkii.hayadihii,dawladihii danaynayay horumarka soomaaliland in ay wax noqoto Gacanweyna ka gaystay taabo galinta horumarka Somaliland.”
Dhinaca Xisbiga UDUB, ayaa mar aanu isna wax ka waydiinay aragtidooda ku wajahan go’aankan Xoghayaha guud ee Xisbigaas Jaamac Yaasiin Faarax. “Saddex qodob ayay Interpeace soo bandhigeen, kuwaas oo qoladan Axsaabtu ay la boodday tii ugu khaladaadka badnayd ee ahayd in lagu galo natiijadaas, Anagu maanu qaadan taas ee waanu ka baydhnay oo waxaanu qaadanay in la qabyo-tiro Serfarka oo muddayda ay qaadataba la qaato..Anagu Xisbiyo ayaanu nahay ee dookhayaga waxa ka sarraynaya go’aanka ay Komishanku qaataan…Haddii Komishankii oo nooga faro dhuudhuubnaa arrinta Serfarka oo uu nooga dhawaa Interpeace iyo farsamooyinkeeda uu gaadhay in aan waxba laga sugin oo uu go’aamiyaa waa mid uu xaq u leeyahay, sidaa ay tahay ayaananu ku tixgelinaynaa Xisbi ahaan.” Ayuu yidhi Xoghayaha guud ee UDUB.